Top 10 Jabbuuti oo si Converter MP4 for Fun
Top 10 Jabbuuti oo si Converter MP4 for Fun!
Taagan qaab web yar, Jabbuuti oo uu ka mid yahay files adag in la beddelay videos. Tani waa sababta GIF images duwan in ay yihiin sawirrada isku xig xiga la lahayn codec audio, files Jabbuuti oo waxaa la soo saaray iyadoo tayada animation weyn iyo codec audio in la uploaded karaa meel kasta. Shockwave Flash ayaa sameeyay qaab file Jabbuuti in ay awoodaan in lagu daro codsiyada kale oo badan sida Microsoft PowerPoint iyo dabcan; goobaha internetka. Inkastoo noocan ah file kordhin oo keliya Flash player shaqayn karaan, diinta files Jabbuuti oo qaab video file u oggolaanaysa in ay la ordi in ciyaaryahanka cayiman warbaahinta ee aad dooratay. Tan iyo Flash files badanaa u baahan yihiin inay leeyihiin arrimo menu si ay si buuxda u shaqeeyaan, ee ay u sameeyaan video file ka ciyaari doonaa iyada oo aan is dhexgalka wax ka user. Iyadoo in, halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah Jabbuuti oo ugu wanaagsan ee converters MP4 inoo diyaar ah haatan.
Wondershare Video Converter Ultimate Waa doorashadaada kaamil ah si loogu badalo Jabbuuti oo si MP4, interface waxaa ka mid ah waa mid aad u user-friendly, newbies baran kartaa sida loo isticmaalo in daqiiqo. Dhanka kale, hawlaha ay tahay mid aad u awood badan, waa qiimaha wanaagsan wax badan oo lacag. Software waxay leedahay laba nooc, version Mac iyo version Windows, aad ka iibsan kartaa adiga oo dalabka.
Beddelaan in ka badan 150 qaabab jiraan Jabbuuti / 4K / 3D
Kuweeda files 30x ka dhaqso badan converters kale
Edit, In kor loo qaado & shakhsiyeeyo Your Videos File
Download videos ka goobaha la wadaago 1000+ video
Guba una astaysto aad DVD la arrimo menu DVD free
Streaming Your Media TV
Dhufto ee ay taageerayaan: Windows, Mac, Online
Developer: Company Wondershare
Price: liisanka 1 sano: $39.95; Meyeydaan liisanka: $49.95 u version Windows, $ 59 u version Mac.
2. Flabaco Jabbuuti oo si Video Converter
Converter An online arrintaasna waa u fududahay in la isticmaalo, tan waa free-u-dhan codsiga saaxiibtinimo la Qalabka telefoonada gacanta, tan iyo markii ay taageerto qalabka HTML5 sida iPhone iyo iPad. In kastoo ma cayimi kartaa qaabab kale video iyo goobaha video, waxa ay u oggolaanaysa in labada uploaded iyo files URL si aanay u soo noqon.
Design khariidad fudud oo sahlan
Awood Upload waa la jaan qaada Qalabka telefoonada gacanta
Kartida taageeridda HTML5
Madal ay taageerayaan: Online, Windows, Mac
Developer: Flabaco ama Flash Banner Converter
3. Movavi Jabbuuti oo si Video Converter
A Converter full-shaqeeyay video in daboolayaa dhammaan waxyaabaha aasaasiga u ah diinta video. Software waxaa loogu tala galay labada xirfadeed iyo qof ahaaneed isticmaalka; kasta faa'iidooyin gaar ah. Converter A kalsoonaan karo waajibaadka culus gudbiyo diinta.
Multiple video qaabab uu ka soo xusho
HTML5 qaabab socon
Record iyo dar audio in ay Jabbuuti oo files
Badalo karaa Jabbuuti oo si files Mpeg u DVD isticmaalada
Madal ay taageerayaan: Windows, Mac
Price: $29.95 loogu isticmaalo guriga, $59.95 in loo isticmaalo ganacsi.
4. File Conversion Dan ee
Tani dhab ahaantii waa adeeg internetka ah oo marti Injineer ah oo madaxbanaan IT oo magaciisa lagu sheegay Dan tagaa. Sameeysa A software naftiisa, Dan isku daya inuu ku dhiirrigeliney in ay dadka isticmaala internet dunida ee la wadaago qalabka wax tar leh ujeeddooyin kala duwan.
Qaab weel kordhin kala duwan uu ka soo xusho
Resizing awoodda si loogu badalo videos galay xallinta la doonayo
Developer: Freelancer Dan
5. Kvisoft Jabbuuti oo si Video Converter
Developed waxqabadka ganacsiga, tani software diinta file waa xoog badan ee in ay diinta ka bixisaa xawaaraha sare loogu qaabab kala duwan weelka. Mid ka mid ah hawlaha ugu fiican ee software tani waa in ay taageerto Deji HD, si aad u yeelan karaan Flash player tayo sare leh files.
Xawaaraha sare ee diinta kuweeda Dufcaddii
Kala duwan qaabab wax soo saarka audio
La jaan qaada qalabka mobile sida telefoonada Android iyo murriyado, iyo sidoo kale consoles'ka kale ciyaaraha
Hawlaha lagu dabakho sida goo iyo dalagga
Taageerayaan madal: Windows
Price: Free 30 maalmood maxkamad, $59.95 u version buuxa
Website A diinta ka ballaaran oo lagu kalsoonaan karo, Online-badalo qabtaa adeegyada kala duwan ee diinta file oo aan ku koobnayn diinta video. Waxaana ay ku aaddan kala duwan oo qaabab weel dokumentiga, audio, videos, iyo xitaa e-buugaagta. Xubnaha Registered guud ahaan ku qanacsan yihiin shaqadooda, ma in kastoo in aad saxiixdo si ay u online badalo.
Doorashooyin badan oo qaabab sida MP4, MKV, AVI iyo FLV
Customizable goobaha video sida jir halkii heerka labaad, heerka yara iyo xitaa goobaha xallinta
Shaqada is-dhexgalka Comprehensive, maadaama ay xitaa taageertaa files PowerPoint
Madal ay taageerayaan: Online, Windows
7. DVDVideoSoft Jabbuuti oo Converter
A free-u-dhan codsiga in loogu talagalay gaarka ah, ganacsatada iyo sidoo kale isticmaalka waxbarasho, Converter this qoreysa badan oo hawlaha wax tar leh marka diinta qaabab la doonayo.
Wuxuu daboolaa qaabab dhif sida DivX iyo AVI u Shocwave Flash files
Design Simple oo si sahlan khariidad
Rukhsad leh isticmaalka inkastoo lacag la'aan ah nolosha
8. Xilisoft Jabbuuti oo Converter
A software si dhab ah oo dhamaystiran in u san yahay in loo isticmaalo guriga, codsigan waa qiimo dollar kasta. Marka laga reebo fududahay in la isticmaalo, waxa kale oo u oggolaanaysa in diinta qaababka burnable sida H.264.
La jaan qaada badan oo qaabab video sida MKV, AVC, dhexena iyo xitaa MOV
Attachable boggaga HTML loogu geeyo online
Xitaa badalo karaa files audio galay files Jabbuuti
9. File Zig Zag
Diinta An online daboolaya ka badan aasaasiga ah, Converter this cayimi kartaa inta u dhaxaysa audio iyo video qaabab oo uu leeyahay noocyo kala duwan oo ah qaabab weel uu ka soo xusho. Iyada oo inta badan Converter online ma taageeri files waaweyn, website waxan sameeya iyo aad email doona faylasha la gediyay haddii ay aad u weyn yihiin.
Xulashada badan oo video iyo maqal ah qaabab
Noocyada kale file sida waraaqaha iyo PDF
Adeeg File kaydinta
10. AST Jabbuuti oo Converter
A qalab diinta ka awood badan oo loogu talagalay Mac OS, ka dhabayso files ee tayo sare leh xawaare sare. Mid ka mid ah hawlaha ugu fiican waa in sharcigaasi waafaqsan yahay Qalabka telefoonada gacanta iyo codsiyada loo jecel yahay oo kale.
Conversion si caadi ah qaabab video
Beddelidda, si ay videos HD sida HD MOV, HD MPEG-4 iyo HD AVI
Codsiyada kale ee sida Lugood, QuickTime, Kan sameeyey Movie iyo qaar badan oo
Madal ay taageerayaan: Mac, Windows
Price: $89.95 u Mac, $49.95 for Windows.
11. Moyea Jabbuuti oo si Video Converter Pro
Software Tani waxay u bedeli karaan Shockwave Flash files in ay yihiin labada kaydiyaa degaanka ee kombiyuutarka ama online dhex URL ah. The videos maamulo la daawan karo oo bilaa saxar ah iyada oo ciyaaryahan ka dhisay-in, samaynta codsigan si dhab ah mid ka mid ah nooc ka mid ah. Muuqaalada waa dad aad u dhan-fekrado oo ku daboolaan arrin badan oo diinta video. Dadka intooda badan waxay isticmaalaan hawlaha software this sababo la xiriira waxbarashada.
Beddelaan files Jabbuuti oo si video iyo maqal ah qaabab sida XVID, MPEG iyo xitaa qaabab Console ciyaarta sida Madaxweyne Siilaanyo 360
La socon kara Qalabka telefoonada gacanta
Hawlaha tafatirka qaabka iyo video Professional
Developer: Moyea Software Co ,. Ltd
Price: $ 49.95 (isticmaalka guriga).
Sida loo Beddelaan IFO in MP4 la Loss Tayada Zero on Windows iyo Mac
> Resource > MP4 > Top 10 Jabbuuti oo si Converter MP4 for Fun!